Sawirro:-Al-shabaab oo soo bandhigay Gaari dagaal ay ku qabsadeen - Damqo
Sawirro:-Al-shabaab oo soo bandhigay Gaari dagaal ay ku qabsadeen
Ururka Al-shabaab ayaa soo bandhigay mid kamida ah gaadiidka dagaalka ay leeyihiin Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ka qabsadeen.
Al-shabaab ayaa sheegay in Dagaal maalmo ka hor ka dhacay duleedka Deegaanka Jaziira ee Magaalada Muqdisho ay gaariga dagaalka uga qabsadeen Ciidamada dowlada ,isla markaana dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
War qoraal ah oo kasoo baxay Al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in gaariga Cabdi Bileha ah ay la wareegeen uu ku xirnaa qoray dhashiike ah, sidoo kale ay gacanta ku dhigeen rasaas iyo saanado kale oo Melleteri.
Gaariga Maleeshiyaadka Al-shabaab ay sheegeen in ay ka qabsadeen Ciidamada dowlada ayaa waxaa ku buufsan Astaanta Ciidamada Militeriga dowlada Soomaaliya,mana jirto wax war oo ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya oo ku aadan gaariga Tiknikada ah ee Al-shabaab ay soo bandhigeen.
Previous Trump oo cambaareeyay weerarrada ka dhanka ah saxaafadda
Next Maxay ka tiri Dowlada Soomaaliya Go’aanadii ka soo baxay Shirkii Midowga Afrika